Shocking: Chinese miner buries Mutare man alive - Gambakwe Media
Home News Shocking: Chinese miner buries Mutare man alive
Shocking: Chinese miner buries Mutare man alive
A Mutare woman is together with her minor child suing a Chinese miner for burying her husband alive during a mine site rehabilitation last year.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights who are representing the widow, Nester Munyongani and her son said the duo wants ZWL$2 million from Xu Zhong Jin Investments.
Munyongani argues that the Chinese miner was told the deceased Sure Mutamba, an artisanal miner, was underground but Xu Zhong Jin Investments continued with the rehabilitation burying Mutamba in the process.
At Mutasa Magistrates Court, Xu Zhong Jin Investments, is standing trial after being sued for damages by the widow for burying Sure Mutamba alive in November 2020 while rehabilitating a mining site at Premier Estate in Old Mutare in Manicaland province.
Previous articleTemba Mliswa slams Mnangagwa for appointing fraudulant Mutsvangwa
Next articleTendai Mtawarira spends funtime with his family
Govt to recover millions from Chihuri
ED Mnangagwa takes 3 weeks annual leave
Kuda Tagwirei exposed for corruptly cashing out USD
Celine Dion Cancels All Her Tours Due to Health Issues
Award winning international artist, Celine Dion has announced the cancellation of the remaining 16 shows of her world tour, due to ongoing health issues. The...